Nhau - Ungasarudze Sei Yakanakisa Kunze Kwekupfeka?
Kupfeka kweVarume neVakadzi
Kubuda munguva yechando, nharaunda dzakasiyana, nguva dzakasiyana, nzira dzakasiyana, mazera akasiyana, sarudzo dzekunze dzekupfeka dzakasiyana. Saka unosarudza sei?
1. Tenzi misimboti mitatu iyi
Kubva mukati nekunze, iwo ari: ziya rukoko-kupisa rukoko-mhepo isingaumbike. Kazhinji kutaura, jira-jira-jira rakapfeka hembe yepasi kana inokurumidza kuomesa t-shati, iyo yekudziya iri mvere, uye denderedzwa remhepo ijekete kana bhachi repasi. Iko kuwirirana kwakaringana kwematatu aya kunogona kugutsa zviitiko zvekushanya zvekunze zvakanyanya. Mumakore achangopfuura, mamwe majeketi matsva esoftshell akaonekwa. Ichi zvakare chisarudzo chakanaka, uye zvakare chine hunhu hwe kudziya nemhepo. Unogona kupfeka imwezve.
2. Sarudza mbatya dzako zvinoenderana nenguva uye nzira
Iwo musimboti wetatu-nhumbi mbatya ndiyo inonyanya kukosha musimboti yechando yekunze mbatya. Uye zvakare, zvipfeko zvinofanirwa kuwedzerwa munguva zvichienderana nemamiriro ezvinhu chaiwo. Kana iwe uchizokwira kwenguva refu, tora pasi jaketi. Paunenge uchifamba pachikepe, unogona kusanzwa kutonhora zvakanyanya nekuda kwekudikitira, kurovedza muviri uye kupisa kwemuviri. Panguva ino, usapfeke pasi jaketi kudzamara uchizorora munzira kana musasa kuchengetedza tembiricha.
3. Sarudza mbatya dzinokodzera mazera akasiyana
Vanhu vemazera akasiyana vanopfeka zvakati siyanei pavanobuda. Kana vakweguru vachiita mitambo yekunze, vanofanirwa kupfeka maturakiti akawanda sezvinobvira kuti vadziirwe. Mbatya-dzakasiyana-siyana dzakasimba dzine simba rekuchengetedza kupisa kupfuura mbatya-imwe chete. Uye zvakare, ivo vanogona kubvisa marita akati wandei ehembe kana ivo vachinzwa kupisa panguva yekurovedza muviri. Kana iwe usiri kuda kupfeka akati wandei hembe, unogona kusarudza mvere pamwe maviri-zvidimbu zvemitambo bhachi kana isina mhepo ine padhu bhachi. Edza kusapfeka majuzi uye pasi majaketi panguva yemitambo yekunze, nekuti majuzi haasi nyore kuomesa mumvura uye anorema. Pasi majaketi anodziya asi haafeme.
Vana havafanirwe kupfeka jira remukati rakakora mukati mekunze kwemukati. Kazhinji zvipfeko zvemukati zvekotoni zvakakwana. Iyo nhete inodziya inogona kupfekwa necashmere jasi + cashmere vest kana diki rakapfekerwa jaketi.